पदबाट राजिनामा दिएपछि , जाँदा जाँदै के भने महराले ? – Latest News, Video, Entertainment,Health
पदबाट राजिनामा दिएपछि , जाँदा जाँदै के भने महराले ?
October 2, 2019 October 2, 2019 Info-Kantipur	0 Comments
काठमाडौं। सहकर्मी महिलामाथि जर्बजस्तीको आ’रोप लागेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनीमाथि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रबाट द’बाब बढेपछि राजीनामा दिएका हुन् ।
रिपोर्टर्स नेपालका अनुसार महराले घ’टनाको निष्पक्ष छानविन होस् भनेर राजीनामा दिएको बताए । उनले भने, ‘ममाथि झु’टो आ’रोप लगाइएको छ यसको निष्पक्ष छानविन होस् भनेर राजीनामा दिएको हुँ ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले महरालाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए । ओली र प्रचण्डले सभामुख मुछिएको घटनाले सरकार र नेकपाको समेत ब’दना’मी हुनसक्ने भन्दै राजीनामा दिन सुझाव दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताका अनुसार सभामुख महरालाई राजीनामा दिएर घ’टनाको निष्पक्ष छानविनका लागि मार्ग खोलिदिन भनिएको थियो । प्रचण्ड निकटस्थ एक नेताले पनि महरालाई राजीनामा दिन सुझाव दिइएको बताए । महराले नेकपाका शिर्ष नेताहरुलाई सम्पर्क गरी आफूलाई फसाउन खोजिएको बताएका थिए । तर, अध्यक्षहरु ओली र प्रचण्डले घटना संवेदनशील भएको र सरकार र पार्टीलाई बदनाम गर्न खोज्नेहरु सक्रिय हुनसक्ने भन्दै राजीनामाका लागि सुझाव दिएका थिए ।
तीनकुनेस्थित एक महिलाको डेरामा पुगेर उनले जर्ब’ज’स्ती गरेको खबर बाहिर आएपछि सभामुख समस्यामा परेका थिए । उनले ज’र्बज’स्ती नभएको दाबी गरेर प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न लगाएका थिए । यसमा कुनै कठपुतली प्रयोग गरी फसाउन खोजेको उल्लेख गरेका थिए । साभार
← यस्ता छन् उडुस भगाउने घरेलु विधि
जापानले खुलायो एक हजार नेपालीका लागि आवेदन, सरकारको अनुरोधमा केही थप गर्ने →
निधनको तीन घण्टा पहिले यस्तो लेखेकी थिइन् सुषमा स्वराजले
August 7, 2019 August 11, 2019 Info-Kantipur 0
दशैंमा विदेशबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ? यी सामानमा तिर्नु पर्दैन भन्सार
September 25, 2019 September 25, 2019 Info-Kantipur 0
चितवन पुगेका रमेश प्रसाईले , सबैलाइ गरे मन छुने अनुरोध- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
August 17, 2019 August 17, 2019 Info-Kantipur 0